ကိုဗစ်ကူးစက်မှုက လျင်မြန်လွန်းနေတာကြောင့် အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ မှတ်ထားသမျှ - ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ - AtoZ Daily
ကိုဗစ်ထိတာ ဆယ်ရက်ခန့်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက် ဒီစာရေးဖို့ စောနေသေးပေမယ့် ကိုဗစ်ကူးစက်မှုက လျင်မြန်လွန်းနေတာကြောင့် အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ မှတ်ထားသမျှ ပြောပြချင်ပါတယ်……။
ကိုယ့်ဆီဘယ်တော့ရောက်မလဲ မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အတွက် ကြိုတင်စုဆောင်းထားဖို့ဆိုရင် လူတစ်ယောက်စာအတွက်
ဓာတ်ဆား ဆယ်ထုပ် ၊ ဘိုင်အိုဂျက်စစ် သုံးကပ် ၊ Vitacee သုံးကပ် ၊ ပြဒါးအဖျားတိုင်း တစ်ခု ၊ အောက်စီဂျင်တိုင်းတဲ့ စက်ကလေး ၊ တစ်ရှူးတစ်လိပ် ၊ ထွန်းရွှေဝါတစ်ဗူးဒါမှမဟုတ်ကျားဘမ်းပရုပ်ဆီ ၊ ရှုဆေးတစ်မျိုးမျိုး
အဖျားကြီးရင်ထည့်သောက်ရန် ဂိုးလ်ဖန်တစ်ကဒ် ဆိုရင် လုံလောက်ပါပြီ…..
ကိုဗစ်ကို ကုသတဲ့ဆေးမရှိပဲ ကိုယ်ခံအားနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိထားပြီးသားပါ…ဒါကြောင့် ပထမဆုံးနှစ်ရက် သုံးရက်မှာ အစာ စားချင်စိတ်မရှိပဲ အော့အန်ချင်နေတာမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင် ဓာတ်ဆားကို ဝင်အောင်သောက်ရပါမယ်….
အဖျားကြီးရင် ရေအေးဝတ်အုပ်ပေးရပါတယ် ၊ ဒါကြောင့်ရေခဲသေတ္တာထဲ ရေခဲတုံးလေးတွေ ကြိုတင်ထည့်ထားသင့်ပါတယ်…
အဖျားကြီးတဲ့အတွက် … ဆေးတွေသောက်ရတဲ့အတွက် အစာမစားချင်ဖြစ်နေမှာပါပဲ… စွပ်ပြုတ်ပူပူနွေးနွေးတစ်ပန်းကန်လောက်တော့ ကြိုးစားပြီး သောက်သင့်ပါတယ်ရှင့်
အဖျားကြီးခြင်းနဲ့ တွဲပြီး ခေါင်းအုံခေါင်းခဲခြင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတဲ့အခါ မကြောက်ကြပါနဲ့…. ကိုဗစ်ကြောင့်ခေါင်းခဲခြင်းအတွက် ထန်းလျက်စစ်စစ်က နိုင်ပါတယ်။တစ်ရက်အတွင်း သုံးလေးခဲခန့် ဝင်အောင်စားပေးရင် သက်သာပါတယ်ရှင့်…….
လူငယ်တွေအနေနဲ့ အဖျားရက်ရှည်တဲ့ ဒီကိုဗစ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါ စိတ်မရှည်တတ်ကြပါဘူး…. လူမမာစာလည်း စားဖို့ အကြောက်အကန်ငြင်းကြပါလိမ့်မယ်…. သူတို့အတွက်ကြိုကြိုတင်တင် ခေါက်ဆွဲခြောက် အသားခြောက် သီးစုံဓာတ်ဆားတို့ကို ကြိုတင်စုထားသင့်ပါတယ်… ကိုဗစ် ဖျားပုံဖျားနည်းကြီးက တစ်မျိုးကြီးပါ..
တငွေ့ငွေ့နဲ့ ချွေးလည်း အများကြီးထွက်နေတာမျိုးပါ….ချွေးထွက်လေ…. နှာမွှန်လေ… နှာမွှန်လေ….အသက်ရှုခက်လေပါပဲ…. အဖျားကျဖို့ ဘိုင်အိုဂျက်ဆစ်သောက်ရပါတယ်.. ဘိုင်အိုဂျက်ဆစ်သောက်ပြန်ရင်လည်း ချွေးတွေက အလွန်အမင်း ထွက်လာပါတယ်…
အဲဒါဆိုရင် အသက်ရှုရတာ နည်းနည်း အဆင်မပြေပါဘူး….. လိုအပ်သည်ထက်ပိုထွက်နေတဲ့ ချွေးကို နည်းသွားစေဖို့ ဆိမ့်တာ တစ်ခုခု စားပေးရပါတယ်။ကြက်ဥပြုတ် နွားနို့ အစေ့အဆံ တစ်ခုခုပေါ့။အဖျားငါးရက်ကျော်လာတဲ့အခါ ညောင်းပြီး နုံးနေတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…. အစားကို ဝင်အောင်များများစားတာမျိုးဖြစ်ဖြစ် စွပ်ပြုတ်သောက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်လည် အားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်……..
သံပရာရည်သောက်ခြင်းဖြင့်လည်း နေရတာသက်သာပြီး အစာစားချင်စိတ်ကို ပြန်ရစေနိုင်ပါတယ်…..နှာမွှန်ပြီ ဆိုတာနဲ့ တစ်ရှူးကို နှစ်ခေါက် ခေါက်ပြီး ထွန်းရွှေဝါဆေး တို့လိုက်ပါ…ထပ်ခေါက်လိုက်တဲ့အခါ လေးခေါက်ချိုးပေါ့..
ဆေးတို့ထားတဲ့ လေးခေါက်ချိုးတစ်ရှူးစလေးကို နှာခေါင်းပေါ်မှာ မကြာမကြာအုပ်ပြီး ရှုပေးပါ… အိပ်တဲ့အခါလည်း နှာခေါင်းပေါ်တင်ပြီး အိပ်ရင် အိပ်ရတာ အသက်ရှု မကြပ်ပဲ လွယ်ကူစေပါတယ်… ဒီနေရာမှာ ထပ်ပြီး ပြောပြချင်တာရှိပါတယ်….
ထွန်းရွှေဝါပဲဖြစ်ဖြစ် ရှုဆေးတစ်မျိုးမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရှုပေးနေခြင်းဟာ နှာခေါင်းရဲ့နှာမွှန်နေခြင်းကို သက်သာစေသလို လိုအပ်တဲ့ဆေးပေးနေရခြင်းလို့လည်း သိစေချင်ပါတယ်…. နှာခေါင်းမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အနံ့တစ်မျိုး ရနေပါလိမ့်မယ်။ရလည်း ရနေပါတယ်။အဲဒီအနံ့အပျောက်မခြင်း ရှူဆေးနဲ့ နှာခေါင်းရဲ့အနံ့ခံအာရုံကို ကုသပေးသင့်ပါတယ်…..
မိမိကျန်းမာရေးအတက်အကျကိုသိဖို့ အဖျားတိုင်းခြင်းနဲ့ အောက်စီဂျင်တိုင်းခြင်းကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်ခန့် တိုင်းသင့်ပါတယ်…. တကယ့်တကယ် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ စိတ်ပျက် အားလျော့ မနေပဲနဲ့ ဘယ်လို အကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်မလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ပြင်ဆင်ပြီး ကျော်ဖြတ် ကြပါ.,…..လို့…..
ကိုဗစ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက် သတ်မှတ်ရက်က နှစ်ပတ်ပါ…. နှစ်ပါတ်မပြည့်မခြင်း အိမ်အပြင်သို့ လုံးဝ မထွက်ခြင်းဖြင့် မိမိမှ သူတစ်ပါးသို့ ကူးစက်ခြင်းအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးကြပါစေ……
Credit : Daw Khin Mi Mi’s Facebook
ကိုဗစ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦး ပြောပြတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကိုဗစ်